Kheyraadka Shaqaalaha - Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale
Waaxda Shaqaalaha ayaa u heellan inay u adeegto 1,900 xubnood oo shaqaalaha degmada ah. Waxaan sidoo kale u adeegnaa kuwa doonaya inay ka mid noqdaan reerkeena!
Maareynta Maqnaanshaha Safka Hore (AESOP)
HealthPartners Well @ Work Clinic
AESOP waa maareynta maqnaanshaha otomaatigga ah iyo nidaamka meeleynta beddelka ee degmadu isticmaasho.
Soo gal AESOP
Tilmaamaha AESOP QuickStart ee Beddelada
Buug-gacmeedka Kaaliyeyaasha Waxbarashada Kaydka ah
Buug-gacmeedka loogu talagalay Macallimiinta Ruqsadda haysta
Arag macluumaadkaaga shaqaalaha, oo ay ku jiraan xaaladda fasaxa, mushahar bixinta iyo xogta shaqaalaha.
Soo gal Skyward
HealthPartners Well @ Work Clinic waxaa heli kara shaqaalaha, kuwa ku tiirsan, hawlgabyada iyo shaqaalihii hore kuwaas oo ku leh caymiskooda caafimaad Dugsiyada Robbinsdale Area. Rugta caafimaadku waa iskaashi ka dhexeeya degmada iyo HealthPartners, waxayna ku bixisaa daryeel caafimaad oo goobta ah oo ku yaal Xarunta Waxbaridda ee New Hope.
Rugta caafimaadku waxay bixisaa adeegyo caafimaad oo tayo sare leh waqti ku habboon. Booqashooyinka daryeel bixiyaha iyo daawooyin badan ayaa adiga iyo xubnaha qoyskaaga lacag la’aan kuugu ah kuwaas oo ku jira qorshaha caymiska caafimaadka degmada. Tababbarka caafimaadka ayaa sidoo kale la heli karaa si looga caawiyo isbeddelada qaab nololeedka.
Fadlan kala xiriir HealthPartners Well @ Work Clinic lambarka 952-883-7293 haddii aad rabto inaad ballan qabsato ama aad wax su'aalo ah qabtid.
Goobta Caafimaadka iyo Saacadaha
Xarunta Waxbarida Rajada Cusub: 8301 47th Ave. North New Hope, MN 55428
Saacadaha Sannad-Dugsiyeedka *
Isniinta iyo Talaado: 9:30 subax - 6 pm
Arbacada, Khamiista iyo Jimcaha: 6 am - 2:30 pm
* Fadlan ogow, haddii degmadu u xiran tahay maalinta barafka awgeed, rugta caafimaad sidoo kale waa la xiri doonaa. Haddii degmadu u xirnaato qabow daran awgiis, rugta caafimaad waa inay furnaataa ilaa inta takhtarka si ammaan ah halkaas ku tagayo.
Isniinta iyo Talaado: 7:30 subax - 4 pm
Haddii aad ku ballamineyso ballantaada ugu horreysa rugta caafimaadka ee Well @ Work, fadlan wac: 952-883-7293.
Ballamada dambe waxaa lagu sameyn karaa adigoo waca lambarka taleefanka (kor) ama khadka tooska ah. Si aad ballan uga samaysato khadka tooska ah, fadlan booqo healthpartners.com/appointment . Gal koontadaada 'myHealthpartners' oo xulo 'Daryeelka Aasaasiga ah' nooca booqashadaada. Ka jawaab su'aalaha ku saabsan booqashadaada oo dooro Well @ Work sidii goobtaada.
Fadlan ogow, waa inaad jadwal u sameysatid daawooyinka laguu qoro. Balanqaadyada lagu soo galo lama heli karo.
Ballanta khadka ee tilmaamaha tallaabo tallaabada ah
Hagaag Buug-yaraha Guud ee Shaqada
Maxaa lagu daaweyn karaa Well @ Work Clinic
Liiska Daawada iyo Su'aalaha La Is Weydiiyo
Foomka Siidaynta Diiwaanada Caafimaadka
Qandaraasyada, Shuruudaha & Shuruudaha, Jadwalka Mushaharka (PDFs)
AFSCME (Shaqaalaha Xafiiska)
Shaqaalaha Caadiga ah
AFSCME Qandaraaska / Gorgortanka Wadajirka ah
Shuruudaha & Shuruudaha Golaha Wasiirada
Jadwalka Mushaharka Shaqaalaha Casriga ah
Qandaraaska Xannaaneynta / Gorgortanka Wadajirka ah
Kaaliyaha Waxbarashada ee Qandaraaska / Gorgortanka Wadajirka ah
Adeegyada Nafaqada Qandaraaska / Gorgortanka Wadajirka ah
Heshiiska Maamulaha / Gorgortanka Wadajirka ah
Shuruudaha & Shuruudaha Kaaliyaha Barnaamijka
Shuruudaha & Shuruudaha Agaasimaha Barnaamijka
Qandaraaska Macallinka / Heshiiska Gorgortanka Wadajirka ah